Usoro weebụsaịtị na Ọnọdụ
Usoro na ọnọdụ a, tinyere Nzuzo Nzuzo anyị, na-achịkwa ihe ị na-eme na ebe nrụọrụ weebụ anyị www.mh-chine.com (saịtị / weebụsaịtị anyị), ma ọ bụ dị ka onye ọbịa ma ọ bụ onye ọrụ edebanye aha. Biko gụọ usoro na ọnọdụ ndị a nke ọma tupu ịmalite iji saịtị ahụ. Site na iji saịtị anyị, ị na-egosi na ị nabatara usoro na ọnọdụ ndị a nakwa na ị kwetara ịgbaso ha. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro na ọnọdụ ndị a, biko zere iji saịtị anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ha ma ọ bụ na ịchọọghị ịnakwere ha, biko kpọtụrụ Onye odeakwụkwọ Ụlọ Ọrụ anyị na 86-574-27766888 tupu iji saịtị weebụ a.
Anyị nwere ike ịgbanwe usoro a na ọnọdụ ma ọ bụ iwu nzuzo anyị n'oge ọ bụla site na imelite ibe a. Ị ga-elele ibe a site n'oge ruo n'oge iji nyochaa usoro na ọnọdụ ndị a iji hụ na ị nwere obi ụtọ na mgbanwe ọ bụla. Iji ma ọ bụ ịnweta ebe nrụọrụ weebụ a na-egosi nkwado gị maka usoro na ọnọdụ ndị a. Ọ bụrụ na ịnabataghị usoro na ọnọdụ ndị a, biko anaghị anọgide na-eji saịtị weebụ a.
Ụlọ ọrụ anyị bụ na #18 Ningnan North Road, Ningbo, China.
Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na telifon na + 86-574-27766888 ma ọ bụ site na email na .
Ebe nrụọrụ weebụ nke usoro a na ọnọdụ ndị a na-emetụta bụ www.mh-chine.com.
Ojiji nke weebụsaịtị a
Enwere ike ịbanye na saịtị anyị na-adịru nwa oge, anyị debekwara ikike iji wepụ ma ọ bụ dozie ọrụ anyị na-enye na saịtị anyị na-enweghị ọkwa. Anyị agaghị abara anyị uru ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ya, saịtị anyị adịghị adị n'oge ọ bụla ma ọ bụ maka oge ọ bụla.
Anyị nwere ike igbochi ịnweta ụfọdụ akụkụ nke saịtị anyị, ma ọ bụ saịtị anyị, ka ndị ọrụ ndị debanyere aha anyị.
A na-echekwa ebe nrụọrụ weebụ a na ihe niile dị na ya na ikike ikike ọgụgụ isi, gụnyere ikike nwebisiinka, ma ọ bụ anyị nwe ma ọ bụ na-enye anyị ikike iji ya. Akụrụngwa gụnyere, ma ọ bụghị nanị na, imewe, nhazi, anya, ọdịdị, eserese, foto, vidiyo na akwụkwọ na weebụsaịtị, yana ọdịnaya ndị ọzọ dịka ndepụta, isiokwu, akụkọ na ihe ederede.
Ị nwere ike ị gaghị edetuo, redistribute, republish ma ọ bụ mee ka ihe ndị dị na weebụsaịtị a ka onye ọ bụla ọzọ na-enweghị nkwenye na ede.
Ị nwere ike ibipụta ma ọ bụ budata ihe sitere na weebụsaịtị a ka ọ bụrụ:
• enweghị ihe ọ bụla a gbanwere n'ụzọ ọ bụla;
• enweghị ndịna-emeputa, foto ma ọ bụ vidiyo na-eji iche iche na ederede ya;
• Edenyere ikike nwebisiinka na akara ahịa anyị na-egosi na akwụkwọ niile ị na-ekweta na ebe nrụọrụ weebụ a dị ka isi iyi nke ihe ọmụma ahụ; ma
• onye ị na-enye ihe ndị a ka a maara banyere mgbochi ndị a.
Ị gaghị eji akụkụ ọ bụla nke ihe ndị dị na saịtị anyị maka nzube azụmahịa n'enweghị ikike ịnweta ya site n'aka anyị ma ọ bụ site n'aka anyị site n'aka ndị ikikere anyị, dịka o kwesiri.
Ngwa na Ịzụ ihe
Ebe nrụọrụ anyị na-enye ohere ịnweta ma jiri ọnụọgụ kọmputa tinyere ma ọ bụghị naanị Seamwork + na Coats Count ("App"). Dika ndi ozo di iche iche di iche iche nwere oru di iche iche ma onye ozo kwesiri iji ihe omuma ya dabere na onu ogugu ndi choro choro. Ihe omuma nke ndi ogugu ihe omuma bu aghota nke eri eri ma si n'echeta uzo nke uzo na ntughari nke uzo na ugbua.
Tụkwasị na nke ahụ, saịtị anyị na-enye ndị ọrụ ịnweta ihe ọzụzụ ("Ihe Ọzụzụ") nke gụnyere ma ọ bụghị nanị na vidiyo ọzụzụ.
Ị ga-agụ, kwenye na emesia ịgbaso usoro ndị a iji jiri ngwa ngwa na ọzụzụ.
Iji jiri Ngwa na / ma ọ bụ Ọzụzụ, anyị nyere gị ikikere iji ngwa ngwa na ọzụzụ maka naanị ọrụ nke ụlọ gị. Akwụkwọ ikikere a bụ nkeonwe ma bụrụ naanị gị naanị yana dịka onye a enweghị ike ịfefe.
Ị gaghị ekesa ma ọ bụ mee Ihe Ngwa na Ngwakọta Ihe dị na netwọk ebe ọ nwere ike iji otutu ngwaọrụ n'otu oge ahụ.
Ịnwere ike ị gaghị edetuo, weghaa, weghachite engineer, gbasaa, gbalịa inweta koodu ntinye nke, gbanwee ma ọ bụ mepụta arụmọrụ nke Ngwa na / ma ọ bụ Ihe Ọzụzụ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla.
Site na iji ngwa ngwa na ọzụzụ, ị kwetara na kweta na:
• Ngwa ngwa na / ma ọ bụ Ọzụzụ maka ihe ọmụma naanị; ma
• anyị enweghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ nkwenye ọ bụla maka eziokwu nke ozi dị na Ihe Ọzụzụ ma ọ bụ ozi sitere na App. Iji nke App a na nsonaazụ ndị a na-ebute site na ya bu atumatu ka ọ bụrụ onye ndu ma ghara itinye aka na onyinye, akwụkwọ ọnụahịa, òkù ịkpọkọta ma ọ bụ yiri.
Ọ bụrụ na anyị mezie data ọ bụla maka nnọchite gị mgbe ị na-arụ ọrụ anyị n'okpuru nkwekọrịta a, anyị abụọ na-edekọ ihe anyị bu n'obi na gị (ma ọ bụ onye ọrụ gị, dịka okwesiri) ga-abụ onye nchịkwa data anyị ga-esite n'aka onye nhazi data na n'ụdị ọ bụla dị otú ahụ :
• ị kwenyere na kweta na data nkeonwe nwere ike, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, bufee ma ọ bụ chekwaa n'èzí European Economic Area ma ọ bụ mba ebe ị nọ, iji nye ọrụ nke App na ọrụ ndị ọzọ anyị nwere n'okpuru nkwekọrịta a;
• ị ga-ekwenye na ị nwere ikike ịnyefe data anyị onwe anyị dị mkpa ka anyị wee jiri iwu kwadoro, hazie ma nyefee data nkeonwe dịka nkwekọrịta a dị na nnọchite gị;
• ị ga-ekwenye na onye ọ bụla ọzọ dị mkpa ekwuputala banyere, ma nye nkwenye ha, iji ya, nhazi, ma nyefee dị ka iwu niile nchedo data nchedo chọrọ;
• anyị ga-ahazi data nkeonwe naanị dịka nkwekọrịta a, usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo na ntụziaka iwu kwadoro nyere gị site n'oge ruo n'oge; ma
• anyị abụọ ga-ewere usoro ọrụ nhazi na nhazi na-akwadoghị na nkwụnyeghị ikike ma ọ bụ na-akwadoghị iwu nke data onwe onye ma ọ bụ ihe mberede, mbibi ma ọ bụ mmebi.
Ihe anyị ji n'aka gị
Usoro na ọnọdụ ndị a anaghị ewepụ ụgwọ anyị (ọ bụrụ na ọ bụla) gị:
• mmerụ onwe onye maọbụ ọnwụ nke na-esi na nleghara anya anyị;
• okwu ọ bụla nke ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị ka anyị wepụ ma ọ bụ gbalịa wepụ ụgwọ anyị.
Anyị anaghị ekwe nkwa na ebe nrụọrụ weebụ a ga-adaba na ihe niile ma ọ bụ ngwaike na ngwanrọ ị nwere ike iji. Anyị anaghị ekwe nkwa na saịtị a ga-adị n'oge niile ma ọ bụ n'oge ọ bụla. Anyị debere ikike iji weghachite ma ọ bụ gbanwee ebe nrụọrụ weebụ a n'oge ọ bụla.
Anyị anaghị ewere ụdị ọ bụla nke ụdị ọ bụla sitere na iji, ma ọ bụ ịdabere na ozi ọ bụla, ihe onwunwe ma ọ bụ usoro dị na saịtị ahụ.
Anyị enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla na saịtị ahụ, ma ọ bụ ihe ndị dị n'ime ya, anyị anaghị arụ ọrụ ọ bụla ọzọ karịa nke edepụtara na usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo anyị.
A na-enye ihe ndị a gosipụtara na saịtị anyị n'enweghị ihe ọ bụla, ọnọdụ ma ọ bụ nkwenye maka eziokwu ya. Ruo n'ókè nke iwu kwadoro, anyị, ndị ọzọ so n'òtù ụlọ ọrụ anyị na ndị ọzọ ejikọtara anyị na-ekwu n'ụzọ doro anya na-agụnye:
• ọnọdụ niile, akwụkwọ ikike na okwu ndị ọzọ nke iwu, iwu nkịtị ma ọ bụ iwu nha nha mara.
Ihe ọ bụla maka ihe ọ bụla:
• kpọmkwem; ma ọ bụ
• ọnwụ ma ọ bụ nke bara uru ma ọ bụ mmebi nke onye ọrụ ọ bụla metụtara na saịtị anyị ma ọ bụ na njikọ na ojiji, enweghị ike iji, ma ọ bụ nsonaazụ nke ojiji nke saịtị anyị, ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla metụtara ya na ihe ọ bụla e tinyere na ya, gụnyere, na-enweghị njedebe ọ bụla ibu maka:
• ụkọ ego ma ọ bụ ego ha nwetara;
• ụkọ ahịa;
• uru nke uru ma ọ bụ nkwekọrịta;
• atụfu ego echere;
• ọnwụ nke data;
• enweghị ọmịiko;
• njedebe ma ọ bụ oge ọrụ; na maka ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla, ọ bụla na-ebili na ma kpatara ahụhụ (ma ọ bụ aghụghọ) (gụnyere ileghara anya), nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụgodị na ọhụụ, ma ọ bụrụ na ọnọdụ a agaghị egbochi ebubo n'ihi ọnwụ ma ọ bụ emebi gaa na ihe onwunwe gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị na-ekwu maka ego efu efu nke na-adịghị ewepụ site na nke ọ bụla nke edemede e depụtara n'elu. Nke a anaghị emetụta ihe anyị nwere maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ nke sitere na nlegharaghị anyị, ma ọ bụ ibu ọrụ anyị maka aghụghọ, nkwupute ụgha ma ọ bụ ịkọwa ụgha maka isi ihe, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a na-apụghị ịhapụ ma ọ bụ ejedebe n'okpuru iwu metụtara.
Ozi gbasara gị na ịga na saịtị anyị
Anyị na-ahazi ozi gbasara gị dịka iwu nke anyị. Site n'iji saịtị anyị, ị kwenyere nhazi dị otú a ma nye gị ikikere na data niile ị nyere bụ ihe ziri ezi.
Ozi on a website
Ọ gwụla ma ozi dị na weebụsaịtị a bụ azụmahịa (gụnyere, na-enweghị njedebe ngwaahịa na nkọwa ọnụahịa), ihe ọmụma ndị ọzọ dị na ebe nrụọrụ weebụ a ka enyere maka ozi zuru ezu na mmasị naanị. Ebe anyị na-agbalị ma hụ na ozi dị na weebụsaịtị ahụ bụ ihe ziri ezi ma dịka ụbọchị, anyị agaghị enwe ike maka nsogbu ọ bụla na ozi ahụ. N'ihi ya, ịkwesighi ịdabere na ozi a, anyị na-akwado gị ka ị nweta ndụmọdụ ọzọ ma ọ bụ chọọ nduzi tupu ịme ihe ọ bụla dabere na ozi dị na weebụsaịtị a. Ihe anyị ji n'aka gị dị ka akọwapụtara n'elu ka na-enweghi nsogbu.
Anyị nwere ike jikọta na weebụsaịtị ndị ọzọ na-anaghị achịkwa anyị. Anyị enweghị ọrụ maka weebụsaịtị ndị a n'ụzọ ọ bụla, ma anaghị akwado ha. Ọ bụ ọrụ gị ịlele usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo na weebụsaịtị ọ bụla ị gara.
Ị nwere ike ị gaghị ejikọta na weebụsaịtị a site na ibe weebụ ọ gwụla ma ị na-agbaso ụkpụrụ nduzi ndị a:
• njikọ ga-adị na saịtị nke weebụ na www.mh-chine.com;
• I nwere ike ghara ịmepụta etiti ma ọ bụ ókè ọ bụla ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ;
• saịtị nke ịchọrọ ịjikọta ga-ekwenyere iwu na iwu niile kwesịrị ekwesị ma ghara inwe ọdịnaya nke a ga-atụle dị ka ihe na-agbaghasị ma ọ bụ mkpasu iwe; ma
• ịkwesighi ịsị na anyị kwadoro ma ọ bụ na ejikọtara na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ndị ọzọ karịa usoro mgbasa ozi na ọnọdụ ịntanetị bụ nke a kpọrọ ịkpọgwọ (ọ bụghị ihe a na-enye), ọ dịghị ihe dị na weebụsaịtị a ezubere ịbụ ma ọ bụ kwesịghị ịkọwa dịka onyinye iji banye na mmekọrịta gị na gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, ma e wezụga maka ndị a usoro na ọnọdụ nke na-achịkwa mmekọrịta dị n'etiti anyị na njikọ gbasara ojiji nke weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ị na-eme nkwekọrịta na onye ọzọ nke a na-akpọ ma ọ bụ zoro aka na weebụsaịtị a, ọ bụ ọrụ gị iji hụ na ị nwere ntụsara ahụ na nkwekọrịta nke nkwekọrịta ahụ na iji ndụmọdụ ndụmọdụ dịka ọ dị mkpa.
Virus, Hacking na mmejọ ndị ọzọ
Ekwesighi iji uzo anyi mehie site n'inwe mmeghe nje nke oma, Trojans, ikpuru, bombu ma obu ihe ndi ozo nke bu obi ojoo. Ị ga-anwa ịnweta ohere n'enweghị ikike na saịtị anyị, ihe nkesa nke echekwara na saịtị anyị ma ọ bụ ihe nkesa ọ bụla, kọmputa ma ọ bụ nchekwa data jikọọ na saịtị anyị. Ekwesighi ibuso ulo anyi agha site na itinye aka ma obu nkesa ajuju nke ndi nkesa.
Site na imebi ndokwa a, ị ga-eme ihe omempụ n'okpuru Usoro Ntugharị Kọmputa nke 1990. Anyị ga-akọ akụkọ ọ bụla dị otú ahụ na ndị ọrụ mmanye iwu ahụ dị mkpa na anyị ga-ejikọ aka na ndị nwe obodo site na igosipụta ha. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ikike gị iji saịtị anyị ga-akwụsị ngwa ngwa.
Anyị agaghị enwe ike ịdaba maka ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ihe nkesa na-adịghị na-ekesa, nke nje virus ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emebi emebi nke nwere ike imetụta ngwa kọmputa gị, mmemme kọmputa, data ma ọ bụ ihe onwunwe ndị ọzọ n'ihi na ị na-eji saịtị anyị ma ọ bụ iji nbudata ihe ọ bụla e nyere na ya, ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla jikọtara na ya.
E guzobere, ịdị adị, iwu, arụmọrụ, ịdị irè na akụkụ niile nke usoro na ọnọdụ a ma ọ bụ okwu ọ bụla nke okwu na ọnọdụ ndị a ga-achịkwa iwu China.
Ụlọikpe ndị China ga-enwe ikike naanị iji dozie esemokwu ọ bụla nwere ike ibute na ma ọ bụ na njikọ na usoro na ọnọdụ ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị.